कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३३ अर्ब ७४ करोडकाे बजेट - Karnalipatra
कर्णालीपत्र संवाददाता १ असार २०७७, सोमबार १३:३९
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत वर्षको भन्दा करिव ५० करोड कम आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।
सुर्खेत, १ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल रु. ३३ अर्ब ७४ करोडको वजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब रु. ५० करोड न्यून […]
१४ बैशाख २०७७, आईतवार ११:२३
२ बजे मन्त्रिपरिषद् बस्दै के होला ? लकडाउन
१६ भाद्र २०७६, सोमबार ०६:१८
छापामा आज; हेर्नुहोस् गृहपृष्ठ
६ बैशाख २०७७, शनिबार २०:४२
नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या ३१ पुग्याे